Akunjalo kudala Dubai kwaba emzaneni nesizotha UAE, labantu zazo ngokuyinhloko pearl abatshuzi nabadobi. Uma kuleli zwe bathole uwoyela, idolobha laphenduka muzi Chic ngengqalasizinda athuthukile, okuyinto ithandwa kakhulu yizivakashi ezibuka ezivela emhlabeni wonke. Ukuze sihlole ngokugcwele ezikhangayo wendawo labo abeza lapha, kufanele uvakashele Uhambo elandelayo e-Dubai.
Idumile abahambi ujabulele safari ehlane. Izivakashi ungabona olunothile zesihlabathi nasezihlahleni ujabulele obumangalisayo kwelanga umbono. Ngaphezu kwalokho, kuphakanyiswa ukuzama emangalisayo ezivulekile izoso imvu bheka ashisayo nemidanso asempumalanga.
Kunezinye izinkambo e Dubai, isibonelo, uthathe uhambo oluya Jumeirah Mosque. Eduze Heritage Village, ukuvakashelwa ezosiza ukuze uqonde kangcono empilweni imihambuma Arabian. Ungabese uvakashele omakhelwane yesimanje futhi abone umuzi kusukela ezisekelweni wokubuka abadumile.
Hlela uhambo enjalo Dubai, njengoba uhambo oluya e-Indian Ocean. Endleleni, ungathola lokujwayela isimo kule okudotshwa, eziningi zazo zisekhona ugcwele zokuphila. Izivakashi unikezwa ithuba ukuzama inhlanhla yakho ukudoba, diving noma umane nje ukhombe ngophakathi ku emabhishi amahle anesihlabathi. Ungaphinde uye ku cruise ulwandle phezu dhow - bendabuko Arabic isikebhe. It unikeza look hhayi kuphela imibono obumangalisayo bay, kodwa futhi ihlelwe idina ehlanganisa sokudla okwehla esiphundu wendawo.
Uhambo e Dubai zahlukahlukene. Labo abafuna ukuthuthukisa yesimanje komuzi, uyokhanga ezisekelweni eziningi yokubuka. Qala lolu hambo ungavakashela ehhotela Burj Al Arab. Kwaphela isikhathi eside sasibhekwa iphuzu esiphezulu kuleli zwe. Okwamanje, isihloko wayiswa umbhoshongo Burj Khalifa. Kufanele kuqashelwe ukuthi kukhona yokudlela, elise ezingeni eliphezulu kakhulu phezu komhlabathi emhlabeni wonke, okungaba ukuthi bazothola kwasemini ngesikhathi uhambo.
Dubai inikeza ezihlukahlukene imisebenzi. Ngakho, le ndawo iyipharadesi abathengi. Lapha, amanani iphansana imikhiqizo lemikhiqizo ezidumile, kusukela izingubo zasendlini. A Ezimakethe zase Sekuyisikhathi eside izivakashi eziningi ithuba ukuhlola zonke ezihlukahlukene Motley izimpahla ahlinzekwa.
Uhambo e Dubai bese uphakamisa uhambo zoo, okuyinto kubhekwa okungcono eMpumalanga Ephakathi. Amapaki amaningi nezimila enhle nakho kuyinto okufanele ukunakekelwa okukhethekile. Ngeke senze iningi izinkambo ngaphandle kokuvakashela sezigodlweni izikhulu kanye Museum wendawo. Ngo epaki amanzi "Splashland" 20 amanzi Ukugibela, futhi omningi ukuzijabulisa izakhiwo. He kubhekwa ngobukhulu kulo lonke i-Asiya.
Naphezu kweqiniso lokuthi Dubai kuyinto nedolobha elikhulu lesimanje, konke futhi ukukhathazeka amasiko ohlonishwayo lasendulo. Lesi esinye sezizathu esenza ukuvakasha komuzi nasezindaweni ezizungezile kuyajabulisa cishe zonke izivakashi.